ရောသမမွှေရုပ်ရှင် ကြောင့် ဆယ်လီမမတွေ နစ်နာရတဲ့အပေါ် သားစိုးက မီဒီယာတွေရှေ့မှာ ဝန်ချတောင်းပန် – Askstyle
ရောသမမွှေရုပ်ရှင် ကြောင့် ဆယ်လီမမတွေ နစ်နာရတဲ့အပေါ် သားစိုးက မီဒီယာတွေရှေ့မှာ ဝန်ချတောင်းပန်
ပရိသတ္ၾကီးေရ ၊ မၾကာေသးခင္က ရုပ္ရွင္ရိုက္ျပီး ပိုက္ဆံတန္ရာတန္ေၾကးမရဘဲ ဒုကၡေရာက္ခဲ့ရတဲ့ မႏၱေလးက တစ္ေတာ့ဆယ္လီမမနွစ္ေယာက္ရဲ႕ ကိစၥ ဟာ ၾကားရသူတိုင္းကို စိတ္မေကာင္းျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္ ။ အခုတစ္ေခါက္မွာေတာ့ ဘယ္ရုပ္ရွင္ေၾကာင့္ ဒုကၡ ေရာက္ခဲ့ရသလဲ ၊ ဘယ္ဒါရိုက္တာ ေၾကာင့္ ဒုကၡ ေရာက္သလဲဆိုတာ ဘူးေပၚသလို ေပၚလာခဲ့ပါျပီ ။
သားစိုး ဒါရိုက္တာ အျဖစ္ ရိုက္ကူးခဲ့တဲ့ ေရာသမေမႊရုပ္ရွင္ကားၾကီး မွာ ပါဝင္သရုပ္ေဆာင္ ခဲ့စဥ္ တစ္ေတာ့မမ ေတြနစ္နာခဲ့ရတဲ့ အတြက္ ဒါရိုက္တာသားစိုး က မီဒီယာေတြေရွ႔မွာ ေတာင္းပန္ခဲ့တာပါ ။ အခုလို အြန္လိုင္းမွ က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ကိစၥ ကို သူ႕အေနနဲ႕ ေသခ်ာမသိခဲ့ရေၾကာင္း ၊ ပထမဆံုး ဇာတ္ကားၾကီးျဖစ္တဲ့အတြက္ အမွားအယြင္းေတြျဖစ္ခဲ့တယ္လို႕ ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ ရႈတင္မန္ေနဂ်ာ ရဲ႕ ကတိကဝတ္ေတြ ၊ ေျပာဆိုမႈေတြ ကို နားေထာင္မိျပီး အခုလို အလြဲေတြျဖစ္ခဲ့ရတယ္လို႕ သိရပါတယ္။
အခုလို ျဖစ္ခဲ့ရတဲ့အေပၚ စာေရးဆရာမ ျဖစ္တဲ့ စာေရးဆရာမ မူပိုင္ႏွင္းဆီ ကေတာ့ ေမတၱာေၾကးအျဖစ္ ေငြက်ပ္ (၁၀) သိန္း နဲ႔ လိုအပ္တဲ့ စီးပြားေရးေတြကို ထူေထာင္ေပးမယ္ လို႔ မီဒီယာေတြေရွ႕မွာ ကတိေပးခဲ့ပါတယ္. တစ္ေတာ့ဆယ္လီေတြကလည္း သူတို႔ နားလည္မႈေတြ လြဲခဲ့ေၾကာင္း မီဒီယာေတြေရွ႕မွာ ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္ ။ ကဲ သားစိုးရဲ႕ ေတာင္းပန္မႈအတြက္ မွတ္ခ်က္ေလးေတြေပးခဲ့ၾကပါဦး ။
Source – Mo Mo Lay TV
ပရိသတ်ကြီးရေ ၊ မကြာသေးခင်က ရုပ်ရှင်ရိုက်ပြီး ပိုက်ဆံတန်ရာတန်ကြေးမရဘဲ ဒုက္ခရောက်ခဲ့ရတဲ့ မန္တလေးက တစ်တော့ဆယ်လီမမနှစ်ယောက်ရဲ့ ကိစ္စ ဟာ ကြားရသူတိုင်းကို စိတ်မကောင်းဖြစ်စေခဲ့ပါတယ် ။ အခုတစ်ခေါက်မှာတော့ ဘယ်ရုပ်ရှင်ကြောင့် ဒုက္ခ ရောက်ခဲ့ရသလဲ ၊ ဘယ်ဒါရိုက်တာ ကြောင့် ဒုက္ခ ရောက်သလဲဆိုတာ ဘူးပေါ်သလို ပေါ်လာခဲ့ပါပြီ ။
သားစိုး ဒါရိုက်တာ အဖြစ် ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ရောသမမွှေရုပ်ရှင်ကားကြီး မှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင် ခဲ့စဉ် တစ်တော့မမ တွေနစ်နာခဲ့ရတဲ့ အတွက် ဒါရိုက်တာသားစိုး က မီဒီယာတွေရှေ့မှာ တောင်းပန်ခဲ့တာပါ ။ အခုလို အွန်လိုင်းမှ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကိစ္စ ကို သူ့အနေနဲ့ သေချာမသိခဲ့ရကြောင်း ၊ ပထမဆုံး ဇာတ်ကားကြီးဖြစ်တဲ့အတွက် အမှားအယွင်းတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ရှုတင်မန်နေဂျာ ရဲ့ ကတိကဝတ်တွေ ၊ ပြောဆိုမှုတွေ ကို နားထောင်မိပြီး အခုလို အလွဲတွေဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့ သိရပါတယ်။
အခုလို ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အပေါ် စာရေးဆရာမ ဖြစ်တဲ့ စာရေးဆရာမ မူပိုင်နှင်းဆီ ကတော့ မေတ္တာကြေးအဖြစ် ငွေကျပ် (၁၀) သိန်း နဲ့ လိုအပ်တဲ့ စီးပွားရေးတွေကို ထူထောင်ပေးမယ် လို့ မီဒီယာတွေရှေ့မှာ ကတိပေးခဲ့ပါတယ်. တစ်တော့ဆယ်လီတွေကလည်း သူတို့ နားလည်မှုတွေ လွဲခဲ့ကြောင်း မီဒီယာတွေရှေ့မှာ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ် ။ ကဲ သားစိုးရဲ့ တောင်းပန်မှုအတွက် မှတ်ချက်လေးတွေပေးခဲ့ကြပါဦး ။